Our Business Model - uab bank
About Us / ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း / uab ၏ စီးပွားရေးပုံစံ
uab ၏ စီးပွားရေးပုံစံ
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးပုံစံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များကိုအကောင်းဆုံးဖြန့်ကျက် အသုံးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ stakeholders များအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သောတန်ဖိုးတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးစွမ်းနိုင်ရန်အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ stakeholders များ၏ အကြံပေးချက်များနှင့် တက်ကြွစွာပါဝင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ် (value creation process) နှင့် စီးပွားရေးပုံစံ၏ (value creation) အပေါ် ထိရောက်မှုအပေါ်၌ အကဲဖြတ်ဆုံးဖြတ်ရန် များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည်။
ရေတိုအကျိုးအမြတ်များသည်ရေရှည်တည်တံ့သောစီးပွားရေးပုံစံတည်ထောင်နိုင်ရန် မဆီလျှော်သည်ကို နားလည်သဘောပေါက်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးပုံစံသည် ကာလတို၊ ကာလလတ်ရည်မှန်းချက် နှင့် ကာလရှည်ရည်မှန်းချက်များကို ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် ဘဏ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်အလျောက် စွန့်စားမှုနှင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများပြီး (due to inherent varied term of assets and liabilities) , ထိုအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာတွင် အသေးစိတ်ဆွေးနွေးထားပါသည်။ This is further exacerbated by the interplay of various intravenous and extraneous factors.
uab bank ၏ မူဝါဒ
ကျွန်ုပ်တို့ uab bank သည် ဆုံးရှုံးနိုင်မှုများကို တိကျစွာ လေ့လာဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးပုံစံအတွက်ရရှိလာနိုင်မည့် အကျိုးရလဒ်နှင့် အခွင့်အလမ်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေသည့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို အကဲဖြတ်လေ့လာပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှုများကို ကြိုတင်အကဲဖြတ်လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ထိုဆုံးရှုံးမှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်သော များပြားလှစွာသော အခွင့်အလမ်းများကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။
ထွက်ပေါ်လာနေသော ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများ
၁။ COVID အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
Client များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များ၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများ နှင့် ရှယ်ယာအရင်းအနှီးများအပေါ် သက်ရောက်မှုများ
ဘဏ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - deteriorating quality of asset base and consequential impact on returns.
အခွင့်အလမ်းများ - COVID ကာလအတွင်းတွင် မိမိနေအိမ်မှ အလုပ်လုပ်ခြင်း (working from home) မှနေ၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် clients များအတွက် နေအိမ်မှရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မည်သူကိုမဆို နေရာမရွေး အချိန်မရွေး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးဗျူဟာဖြစ်ပါသည်။
၂။ Mobile Wallets
Client များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - clients များသည် ပုံမှန် ရရှိနေသော ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် fintech ဝန်ဆောင်မှုများသို့ ပြောင်းလဲသွားခြင်း
ဘဏ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - decreased customer base, poor risk diversification, reduced non-interest-based income
အခွင့်အလမ်းများ - mobile wallets များသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအကြောင်း ပိုမိုသိနားလည်စေပြီး ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ mobile wallets များပေါ်ထွက်လာခြင်းကြောင့် ငွေသားအခြေပြုအသုံးစွဲခြင်းမှ digital စီးပွားရေးအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းစေပြီး customers များနှင့် အစုရှယ်ရာများကို တိုးပွားလာစေနိုင်ပါသည်။
၃။ တိုးပွားလာသော ပြိုင်ဆိုင်မှုများ
နိုင်ငံခြားအခြေစိုက်ဘဏ်များမှ retail banking နှင့်ပတ်သက်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ပေးဆောင်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - တူညီသော targeted customers များကို ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ပြိုင်ဆိုင်ခြင်း
ဘဏ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - impact to growth rate in new to bank customers and consequential impact on revenues and returns.
အခွင့်အလမ်းများ - ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြိုင်ဆိုင်မှုများကို ဘဏ်လုပ်ငန်းခွင်တိုးတက်စေရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဟုယူဆပြီး peers များဆီမှ တစ်ဆင့်ပြန်လည် လေ့လာသင်ယူကာ အစဉ်အမြဲတိုးတက်ရန် ယှဉ်ပြိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။